ပြင်သစ်တွင် 'ဂျေ Suis Plein' 'အသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
လျော်ပွငျသစျထဲတွင် '' ဂျေ Suis Plein '' အသုံးပြုနည်းကိုလေ့လာပါ
ဒါဟာသူတို့ကဲ့သို့သောထားသောစာပိုဒ်တိုများအသုံးပြုနေသည်အထူးသဖြင့်လျှင်, စကားပြောဆိုမှုအတွက်အမှားတွေဖြစ်စေ Non-ဇာတိပြင်သစ်စပီကာများအတွက်ဘုံရဲ့ဒီဇာတျလမျးကိုမြင်ယောင်ကြည့် "je suis plein ။ ": သင်ကဘစ်စထရိုမှာနေ့အရသာ, ဖြည့်စွက်မုန့်ညက်ခဲ့ကြပါပြီ။ အဆိုပါစားပွဲထိုးသင်အချိုပွဲအတွက်ဂရုစိုက်ချင်ပါတယ်လျှင်မေးရန်အားဖြင့်လာသည်။ သငျသညျကျပ်, ဒါကြောင့်သင်ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးသငျသညျအပြည့်အဝပါပဲဟုကျဆင်းပါတယ်။ အဆိုပါစားပွဲထိုး awkwardly ပြုံးပြတယ်။ သင်ရုံဘာပွောခဲ့သလဲ
နားလည်မှု "ဂျေ Suis Plein"
အဆိုပါ ပြင်သစ်ဘာသာပြန်ချက် "အပြည့်အဝ" ၏ကသင့်ရဲ့အစာအိမ်မှကြွလာသောအခါ မှလွဲ. plein ဖြစ်ပါတယ်။
"je suis rassasié" (ငါကျေနပ်မိပါတယ်) (စာသား, ငါသိပ်စားရကြ၏), နှင့် "je n'en peux ပေါင်း" "j'ai trop Mang" တို့ပါဝင်သည် "ကျွန်မအပြည့်အဝပေါ့" ဟုပြောမှန်ကန်သောနည်းလမ်းများ (ကျနော် ) တော့ဘူး [ယူရ] လို့မရပါဘူး။ သငျသညျဘာသာစကားအသစ်အနေလျှင်မူကား, သင်သည်ဤသိမ်မွေ့ပျော့ပြောင်းသတိထားမည်မဟုတ်ပါ။
ဒါဟာပြင်သစ်တွင်လူအများစုအဓိပ္ပာယ်အဖြစ်ထားသောစာပိုဒ်တိုများအနက်ကိုဘော်ပြ "ငါအပြည့်အဝပေါ့" ဆိုလိုဖို့ "je suis plein" ကိုအသုံးပြုရန်ယုတ္တိထင်ရနိုင်ပေမဲ့ "ငါသည်ကိုယ်ဝန်ပေါ့။ " ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာတစ်ခုခုကြောင့်ပြောဟာအလွန်ကောင်းတဲ့လမ်းကိုမဖွင့် အဆိုပါထားသောစာပိုဒ်တိုများ " être pleine" ကိုယ်ဝန်ဆောင်တိရိစ္ဆာန်များမဟုတ်ဘဲလူတွေကအကြောင်းပြောဆိုရန်အသုံးပြုသည်။
ပြင်သစ်မှအတော်များများကဧည့်သည်ကဤစကားရပ်၏အလွဲသုံးစားမှုများပါဝင်သောသို့ရာတွင်ရှိသည်။ အဘယ်အရာကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရဲ့အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်အမှန်တကယ်တစ်ဇာတိပြင်သစ်စပီကာရန် "je suis pleine" ပြောပါတယ်လျှင်ဖြစ်ပါသည်, သူသို့မဟုတ်သူမဖြစ်ကောင်းသူမကိုယ်ဝန်ဆောင်ရဲ့ဆိုလိုမှနားလည်ပါလိမ့်မယ်။ သင်တစ်ဦးဇာတိစပီကာနှင့်အတူစိတ္တဇ၌ဤစကားရပ်အကြောင်းပြောဆိုလျှင်သေး s / သူတယောက်မျှမရှိအစဉ်အဆက်ကသာတိရိစ္ဆာန်များအတွက်အသုံးပြုမယ့်ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ကကိုယ်ဝန်ဆောင်နေဆိုလိုမှယူမယ်လို့သင်ပြောပြဖွယ်ရှိပါတယ်။
မှတ်စုများ: ဂျေ suis plein လည်းပြောနေတစ်ဦးအကျွမ်းတဝင်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ် "ကျွန်မအရက်မူးတယ်။ " ကွိဘက်နှင့်ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ, ပြင်သစ်နှင့်မတူဘဲကဆိုလိုဤထားသောစာပိုဒ်တိုများသုံးစွဲဖို့ဿုံလက်ခံနိုင်ဖွယ်ရဲ့ "ကျွန်မအပြည့်အဝရှိပါတယ်။ "
တစ်ခုချင်းစီကိုအင်္ဂလိပ်လို၏ Visual ူးပတင်းမာနေ
Conjugation '' Arrival 'ဖို့တစ်ဦးကအဆင့်-by-step လမ်းညွှန် (ရောက်ရှိရန်)
(ဖြစ်လာမှ) အ Irregular ပြင်သစ်ကြိယာ Devenir Conjugating
ဒါဟာအကြားခြားနားချက်င် vs. ၎င်း၏
အီတလီကြိယာ conjugation: Restare
နာမဝိသေသန Clauses နှင့်အတူဝါကျတည်ဆောက်ခြင်း
Spondylus: အဆူးကမာ၏ Precolumbian အသုံးပြုခြင်း
ကနေဒါပင်စင်အစီအစဉ် (CPP က) အပြောင်းအလဲများ
1920 ၏ timeless မတ်ေတာသသီချင်းများ
ပြင်သစ်ဝေါဟာရသင်ခန်းစာ: Quantities, အလေးချိန်နှင့်ဆောင်ရွက်ချက်များ
အင်တိဖရိစ်ဓါတ် - Red, Green သို့မဟုတ်က Universal, ဒါကမေးခွန်းပါ!
အဆိုပါလေ့လာမှုကျွန်းအစီအစဉ်: တစ်ခုက In-Depth ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
'' အဆိုပါဒေါက်တာ Oz ကိုပြသပါ '' မှအခမဲ့လက်မှတ်တွေကိုရယူလိုက်ပါလုပ်နည်း
တစ်ဝါကျထဲမှာ Predicate Find လုပ်နည်း
1953 Corvette: ထုတ်လုပ်ပထမ Corvette
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်: Gazala ၏တိုက်ပွဲ
အင်္ဂလိပ်သင်ယူသူများအတွက်အနာဂတ် Form များ
Ulysses Grant က - အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု့ရှစ်ကသမ္မတ
အဆိုပါ Electron ဏုဖို့နိဒါန်း
အဆိုပါ NFL နောက်ဆက်တွဲမူကြမ်းလုပ်ငန်းစဉ်တခုအတွင်းလမ်းညွှန်